HejHajimete कुनै गैल - सीजन २ सम्भावित प्रिमियर मिति - पालना दृश्य
हाजीते नो गल सिजन २
by लिली गार्सिया 28th मई 2020 12th जनवरी 2022
1 टिप्पणी हाजिमेट नो गलमा - सीजन २ सम्भावित प्रिमियर मिति
हामीले Hajimete no Gal Season2स्थितिमा हालैको लेख बनाएका छौं किनकि यो हालको छ र हामीसँग थप जानकारी छ। कृपया यहाँ पढ्नुहोस्:
सिंहावलोकन - हाजिमेट कुनै गैल सीजन २ सम्भावित प्रिमियर मिति
हाजिमेट नो गाल, जसले लगभग "मेरो पहिलो प्रेमिका गला हो" अनुवादित केवल १० एपिसोड मात्र प्रस्तुत गर्दछ, तर कुनै कारणका लागि श्रृंखला (यदि तपाईं यसलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ)) एनिमे फ्यानहरू र आलोचकहरूमाझ मनपर्ने हो।
मुख्य चरित्र यामे युकानाको शरीरको बाहेक, यसको हास्यास्पद प्रकृति र मोहक आकर्षणले दर्शकहरूलाई चारैतिर हेर्दै रहन्छ।
यदि तपाईंले भर्खरै क्लेनाड वा स्कर्मको इच्छा जस्ता एनिमेस हेर्न समाप्त गर्नुभयो भने, हामी तपाईंलाई यो हेर्ने सल्लाह दिन्छौं किनकि यसले तपाईंलाई खुशी पार्नेछ।
सबै पात्रहरू यादगार र हेर्नको लागि रमाईलो छन् र वास्तवमा, मैले आफु मेरो टाउको हाँसेको भेटें केही पात्रहरूले भनेको कुराकानीमा।
मुख्य पात्रहरू - हाजिमेट कुनै सीजन2सम्भावित प्रीमियर मिति
पहिले हामीसँग छ यम युकाना, जो लोकप्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालयको विद्यार्थी हो जहाँ दोस्रो मुख्य चरित्र जुनिची उपस्थित हुन्छ। उनी लोकप्रिय केटीको रूपमा देखिन्छ किनभने उनी बोल्छन् र काम गर्छिन्। जुनिची र उनका साथीहरू लगायत अन्य विद्यार्थीहरूको लागि उनको सामान्य समग्र दृष्टिकोण "ग्याल“। यद्यपि यो खुलासा गरिएको छ कि उनी शोले चित्रण गरेकी थिइनन्, र यो तथ्यमा अत्यन्त वांछनीय चरित्र रहेको छ। उनी आफ्नो उपस्थितिमा आधारित अरूको न्याय गर्न देखिदिनन् र राम्रो मनसाय भएको दयालु र मायालु व्यक्ति देखिन्छन्।
को पाठ्यक्रम को दोस्रो हो जुनिचि हसीबा, जो युकानाको रूपमा उहि विद्यालयमा पनि जान्छ। सुरुको एपिसोडहरूमा जुनिचिलाई "एक मूर्ख", "मैल" र समग्र अवांछनीय व्यक्तिको रूपमा देखिन्छ। यो किनभने स्कूलमा छँदा उसले युकानाले एउटा अश्‍लील पत्रिका हेरिरहेको थियो। यद्यपि, यसले पत्ता लगायो कि जुनिची एक साधारण मान्छे हो जो कुनै ड्रामा बिना जीवन बिताउन चाहन्छ र आफ्नो कुमारीत्व छोड्छ, धेरै साथीहरू जस्तो उनीहरूको अनुमोदनको लागि।
उप क्यारेक्टरहरू - हाजिमेट कुनै गैल सीजन २ सम्भावित प्रीमियर मिति
यी सबै पक्षका चरित्रहरूले राम्रो वातावरण प्रदान गर्न एकदम राम्रोसँग काम गरे, समग्र कथालाई रमाइलो र रमाईलो बनाउने र निश्चित रूपले रिवाउन्ड हुने। हुनसक्छ, त्यहाँ अन्य पात्रहरू छन् जुन हामी हामीले उल्लेख गर्न सक्छौं, यद्यपि हामीसँग यी सबै कभर गर्ने समय छैन त्यसैले यहाँ केही सम्मानजनक उल्लेखहरू छन्।
त्यहाँ अर्को चरित्र छ जसको नाम मैले उल्लेख गर्दिनँ किनकी उहाँ शाब्दिक पेडोफाइल हुनुहुन्छ, तर केहि कुरा उसले मलाई भनेको थियो मेरो अनुहार बन्द गरेर। यो अधिक थियो “म विश्वास गर्न सक्दिन कि उसले वास्तवमै भनेको थियो कि हाँस्न” भन्दा “ओह यो मान्छे यति हास्यास्पद हाँस्न”, तर कहिलेकाँही कमेडी अन्धकारमा हुनुपर्दछ यसले काम गर्नका लागि। मलाई थाहा छ कि पेडोफिलिया कुनै मजाक होइन, तर कृपया यो क्लिप हेर्नुहोस् र तपाईले मेरो मतलब के देख्नुहुनेछ। मलाई आशा छ हामीसँग हाजिमेटे कुनै सीजनको मौसम2मा यो राक्षस देख्ने कृपा छैन।
सीजन १, एपिसोड from बाट लिइएको - हाजिमेट कुनै गलले सीजन २ पाउनेछ?
मुख्य कथामा फर्कदै, पूरा प्लॉट जुनिचीको वरिपरि घुम्छ गल्तीले युकानालाई सोध्छु। यो किनभने ऊ उसका साथीहरु द्वारा गर्न को लागी स्थापित गरिएको छ, जो हामी पछि आउनेछौं। उसको साथीले युकानाको लाकरमा एउटा नोट छोड्दै उनलाई स्कूलको पछाडि भेट्न भन्यो र जुनिचीले देखाउँदा युकाना उसको पर्खाइमा थिए। मुख्य कथा धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो हेजिमेट नो ग्यालको सीजन २ को सम्भावनासँग सम्बन्धित छ।
उनीहरूले केहि समयका लागि कुरा गरे र अन्तमा जुनिचीले युकानालाई आधा मनले सोधे कि उनी जे भए पनि केही नभन्ने सोचे। जे होस्, दुई र दुई बीच कुरा पछि, Yukana सहमत र दुई डेटिंग सुरु। बाँकी ep एपिसोडहरू प्रयासहरू हुन् जसमा युकाना र जुनिची संलग्न छन्। र, जसरी कसैलाई यो आवाज लाग्न सक्छ बोरिंग जस्तै, बाँकी ep एपिसोडहरू वास्तवमै मेरो लागि धेरै मनोरन्जनात्मक थियो।
"は じ め て の ギ ャ ル (NAZ) बाट लिइएको
हामी जुनिची र युकाना सँगै धेरै रमाईलो भएको हेर्न सक्छौं, र यसको सम्बन्धको परिणाम स्वरूप तिनीहरूको सम्बन्ध बढ्दै जान्छ। यद्यपि यस्तो देखिन्छ कि परम्परागत रूपमा आकर्षक युकाना कत्ति आकर्षक छ, र उनले अभिनय गर्ने तरीकाले, जुनिचीले मानिन् कि उनी उनीबाट धेरै आकर्षक खेलमा लगिनेछन्। यो एक समस्या हो कि ती जोडीले उनीहरूको सम्बन्धमा सामना गर्छन् र वास्तवमा जुनिचीले वास्तवमा युकानालाई विश्वास गर्दैन, र उनी पछिपछि पीडित हुन्छन् जब उनी आफ्ना केही पुराना साथीहरूसँग भेट्न जान्छन्। त्यहाँ सम्बन्ध धेरै नै हुनेछ र अझै पनि मौसममा प्रभावशाली छ वा त्यहाँ हाजिमेटको सीजन २ हुनेछैन कुनै ग्याले।
वास्तवमा सम्पूर्ण श्रृ series्खलामा, यो जुनिची हो जसले युकानालाई विश्वास गर्दैन र अन्य तरिकाले पनि गर्दैन। हामी पछिल्ला शृ .्खलाबाट सिक्छौं कि युकानाले सामान्यतया जुनिचिलाई महसुस गर्छ र वास्तवमा उसको हेरचाह गर्छ। उनी जुनिचिसँग रोन्कोलाई “मेसिनको वरिपरि” भेट्दा उनी रिसाउँछिन् जब उनी उसलाई जबरजस्ती यौनसम्बन्ध राख्न खोज्छिन् किनकि उनी युकाना सबैलाई चाहिन्। यो कसरी हाजीमेट नो ग्यालको सीजन २ को सम्भावनामा प्ले हुनेछ? पत्ता लगाउन पढ्नुहोस्।
यद्यपि श्रृंखलामा केवल १० एपिसोडहरू (र एक OV) मात्र समावेश छन्, यसले दर्शकलाई मनोरन्जनको भावनामा धेरै प्रदान गर्दछ। पूरै श्रृंखला अजीब छ, कहिलेकाँही कामुक र यसको बारे मा एक किसिमको आकर्षण छ कि यो पक्कै पनि यो हेर्न मलाई मोहित। म निश्चित रूपमा यसलाई जान्छु यदि तपाईं एनिमेसको एक निराशाजनक प्रकारको हेराई पछि महसुस गरिरहनु भएको छ किनकि यसले निश्चित रूपले तपाईलाई खुशी तुल्याउनेछ।
हाजिमेट कुनै गैल - सीजन २ सम्भावित प्रिमियर मिति
अहिलेसम्मको दोस्रो संस्करण (र संस्करणले हाम्रो मतलब दोस्रो म )्गा) अझै मेगुरु यूनो द्वारा लेख्न बाँकी छ र वास्तवमा मा first्गा पहिलो कथाको अन्त्य बिल्कुल निर्णायक थियो। यो किनभने हामीले दुबै जुनिची र युकाना एक अर्कासँग कुरा गर्न छोडे पछि फर्कन्छौं। यसले स्पष्ट रूपमा मौसमलाई असर गर्छ वा त्यहाँ हाजिमेट नो गैल सीजन २ हुनेछ।
यसले मa्काको दोस्रो एनिम अनुकूलनको सम्भावना धेरै कम बनाउँछ। यो लाजमर्दो कुरा हो कि हामी सायद दुईवटा पात्रहरू फेरि भेट्ने छैनौं, तर अधिक लिखित सामग्री तयार नभएसम्म हामीले आशा गर्न सक्ने सबै हुन्छ।
त्यसोभए हामी हाजीमेट नो गैल सीजन २ को लागि भन्न सक्दछौं र आश्चर्यको कुरा त्यहाँ त्यहाँ धेरै एनिमेस छैन जुन प्रकृतिमा हाजेमेट नो गलसँग मिल्दोजुल्दो छ, र यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। हामीले नजिकैको एनिमेस हामीले हाजेमेटे कुनै गालमा फेला पार्न सकेनौं “कृपया मलाई भन्नुहोस्! गाल्को-चान "तर पनि हाजेमेट नो गालसँग एकदम फरक कथा छ।
यदि तपाईंलाई यो पढ्न रमाईलो लागेको छ भने कृपया हाम्रो अन्य पोष्टहरू र हाम्रो साइटलाई सामान्य रूपमा जाँच गर्नुहोस्, किनकि हामी त्यस्तै ब्लगहरू यस साइटमा पोस्ट गर्दछौं साथसाथै अरू विचारहरू र समाचारहरू। यी ब्लग पोष्टहरूमा र सामान्यतया यस साइटमा प्रयोग गरिएको सबै सामग्री सार्वजनिक स्रोतहरूबाट लिइएको छ र सूचना र मनोरन्जन उद्देश्यका लागि प्रकाशित गरिएको छ। पढ्न को लागी धेरै धन्यबाद!
टैग: हाजेमेटेनोगल हाजीमेट कुनै गैल हाजीमेट कुनै गैल सीजन २ hajimetenogalseason2potential season2hajimetenogal
राम्रो ब्लग, जारी राख्नुहोस्!
अघिल्लो प्रविष्टि Scum's विश सीजन2- प्रिमियर मिति + समाप्ति व्याख्या गरियो
अर्को प्रविष्टि ब्ल्याक लगुन - किन सीजन4सम्भव छ, र समय यो प्रिमियर हुनेछ